Horudhac: Bayern Munich vs Paris Saint-Germain… (PSG oo doonaysa inay caawa ka aar-gudato Bayern oo ku garaacay Final-kii UEFA Champions League ee 2019-20) – Gool FM
Horudhac: Bayern Munich vs Paris Saint-Germain… (PSG oo doonaysa inay caawa ka aar-gudato Bayern oo ku garaacay Final-kii UEFA Champions League ee 2019-20)
(Munich) 07 Abriil 2021. Kooxda difaacaneysa koobkan ee Bayern Munich ayaa isku diyaarinaysa inay markale ku guuleysato tartankan, iyadoo caawa wajahaysa kooxdii xilli ciyaareedkii hore ku garaacday final-ka Champions League ee Paris Saint-Germain.
Naadiga reer Jarmal ayaa soo dhoweynaysa PSG lugta hore ee wareegga siddeed dhammaadka Champions League, waxaana kulankan uu caawa ka dhici doonaa garoonka Allianz Arena.
Robert Lewandowski ayaa garoomada kaga maqnaan doona afar todobaad dhaawac jilibka ah, waxaana uu seegi doonaa labada lugood ee ay wajahayaan Paris Saint-Germain.
Serge Gnabry ayaa laga helay Korona Fayras, sidaas darteed xulashada weerarka Kooxda martida loo yahay ee Bayern Munich waa mid xadidan.
Eric Maxim Choupo-Moting ayaa ku soo bilaaban kara safka hore, laakiin la yaab ma noqon doonto haddii Macallin Flick uu la yimaado qaab kale kulankaan.
Alphonso Davies iyo Jerome Boateng ayaa halkaan ku soo laabtay kaddib markii ay seegeen kulankii RB Leipzig ee isbuucaan oo ay ganaax ku maqnaayeen.
Lucas Hernandez iyo Niklas Sule ayaa tartan kula jira Davies iyo Boateng, siday u kala horreeyaan, si ay boos uga helaan shaxda koowaad ee kulanka caawa, iyadoo Davies xitaa uu sii ciyaari karo.
Marco Verratti iyo Alessandro Florenzi ayaa soo laabtay kaddib caabuqa Korona Fayras oo ay la maqnaayeen tan iyo markii ay ka soo laabteen waajibaadka xulkooda qaranka Talyaaniga.
Marco Verratti ayaa laga helay Korona Fayras, wuxuuna seegay safka Paris Saint-Germain taasoo dhabar jab weyn ku ah kooxda martida ah.
Iyadoo uu shaki ku jiro Danilo Pereira, Ander Herrera ayaa laga yaabaa inuu la safto Idrissa Gueye oo uu khadka dhexe kala soo muuqdo, iyadoo Leandro Paredes uu ganaax ku maqnaan doono.
Thilo Kehrer runtii wuu ku dhibtooday Lille isbuucaan maqnaanshiyaha Florenzi, waxaana laga yaabaa inuu booskiisa ku waayo Colin Dagba ciyaarta caawa.
Mauricio Pochettino ayaa ugu yaraan haysta caawa Neymar oo soo kabsaday tan iyo markii ay ka saareen Barcelona tartanka markii ugu dambeysay.
Mauro Icardi iyo Layvin Kurzawa ayaa shaki kale laga galinayaa kooxda martida ah kaddib markii ay maqnaayeen isbuucaan.
>- Bayern Munich ayaa guuleysatay 18 ka mid ah 19-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Champions League.
>- Kooxda Bayern Munich ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 17 ka mid ah 19-keedii kulan ee ugu dambeeyey Champions League.
>- Bayern ayaa guuleysatay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Kooxda PSG tartammada oo dhan.
>- Kooxda Bayern Munich ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ay garoonkeeda ku soo dhoweysay PSG dhammaan tartammada kala duwan.
>- PSG ayaan la garaacin shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Champions League.